Vivaldi 3.2 inosvika ichivandudza kwazvo Pop-kunze uye neiyi mitsva maficha | Linux Vakapindwa muropa
Vivaldi 3.2 inosvika ichivandudza kwazvo Pop-kunze uye nezvose izvi zvitsva
Kunge mwedzi wega wega anenge uye mushure v3.1, Vivaldi Technologies yatanga mutsva mutsva webrowser yayo, kunyanya Vivaldi 3.2. Sezvakamboita vhezheni yapfuura, kumwe kushandurwa kwakaunzwa nguva ino kwauya kuzogadziridza yavo Pop-kunze, chinova chinhu kunze kwePiP system yavo (Mufananidzo-mu-Mufananidzo kana hwindo rinotenderera remavhidhiyo) iyo yavakada kufonera kubva kune mumwe nzira yeku, zvakanaka, kumira zvishoma kubva kune vamwe. Kunyangwe chokwadi chiri chekuti izita rekuchinja iro ini pachangu handidi.
Vivaldi 3.2 inotibvumidza isu kudzora zvirinani Pop-kunze, ine bhatani rakapfava riri pakati pevhidhiyo kupatsanura hwindo, bhatani nyowani yekunyarara kana kusimbisa rwiyo, uye zvekutamba zvekutamba, kusanganisira bhaidhi rekusimudzira kana kunonotsa vhidhiyo. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kudzora kurira kwetabhu uye nekukurumidza mirairo. Pazasi iwe une runyorwa rweimwe nhau dzakasvika naVivaldi 3.2.
Vivaldi 3.2 inosimbisa
Pop-kunze kuvandudza, senge nyowani odhiyo mbeveve bhatani.
Sarudzo yekuchinja chinzvimbo chebhatani kuti uvhare tab.
PaMacOS, akasiyana ekuisa profiles uye madhairekitori anogona ikozvino kushandiswa for snapshots uye trailers.
Mubhawa rekero, dambudziko nekutsvaga kwePOST rakagadziriswa, imwe iyo isina kurangarira saizi yetsika uye iro kiyi rinofanira kuvharidzirwa nepesenti muchikumbiro.
Favorites izvozvi zvagara zvine zita rimwechete rekusarudzika mumafolda uye iyo yakasanganiswa duplicate yakagadziriswa.
Kushanda kwe otomatiki kugadzirisa.
Kuvandudza mukutungamira kwekuwedzera.
Cherekedza maneja kugadzirisa.
Kubvumirana kwagadziridzwa mushanduro iyi.
Mushandisi interface inovandudzwa, kusanganisira anotsvedzerera mac curves.
Iwe une rondedzero izere yeshanduko mune yekuburitsa noti, inowanikwa pa Iyi link (muChirungu).
Vivaldi 3.2 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune yepamutemo kurodha peji reiyo projekiti, iwe yaunogona kuwana kubva pano. Kune vashandisi varipo, iyo nyowani vhezheni ichave yakamirira mune yakajairwa yekuvandudza system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vivaldi 3.2 inosvika ichivandudza kwazvo Pop-kunze uye nezvose izvi zvitsva
Linux inodzivirira kukura kwayo muna Nyamavhuvhu. Yakakwira here?
Funga kuvharira vatyairi vanopa mukana weGPL kufona kuLinux kernel